Tag: nuqul iibka | Martech Zone
Tag: nuqul iibka
Gaarsiinta Iibka: Lix Istiraatiijiyadood oo guuleysata Quluubta (Iyo Tilmaamo Kale!)
Tuesday, May 18, 2021 Tuesday, May 18, 2021 David Wachs
Qorida waraaqaha ganacsiga waa fikrad dib ugu laabaneysa waagii hore. Waqtiyadaas, waraaqaha iibka jireed waxay ahaayeen isbeddel loogu talagalay in lagu beddelo suuqleyda albaab iyo albaabadooda. Waqtiyada casriga ahi waxay u baahan yihiin habab casri ah (kaliya fiiri isbeddelada ku jira xayeysiinta muujinta) iyo qorista waraaqaha iibka ganacsiga ayaan laga reebin. Qaar ka mid ah mabaadi'da guud ee ku saabsan foomka iyo walxaha warqad iib ah oo wanaagsan ayaa wali la adeegsadaa. Taasi waxay tiri, qaabdhismeedka iyo dhererka warqaddaada ganacsi waxay kuxirantahay